Naharay antso avy amin’ny olona tsara sitra-po ny polisy fa misy olona mivarotra rongony eo Anosibe Angarangarana. Natao ny fanaraha-maso azy ireo ka tsikaritra tamin’izany fa misy tovolahy mivezivezy mivoaka sy miditra ao amina trano iray. Niroso avy hatrany taminy fisamborana ireo olona ireo ny polisy ka niroso tamin’ny fidirana tao anatin’ilay trano koa. Enin-dahy no voasambotra tao anatin’io trano io ary nahitana rongony enina gony ihany koa tao izay efa vita fonosana ny roa gony ary mbola atsinjarany kosa ny efatra gony. Nandritra ny fanadihadiana azy ireo no nahafantarana fa amidiny 500 Ar ny fonosana rongony iray ary antso an-tariby no ifandraisany amin’ny olona mpanatitra izany rongony izany ao aminy. Efatra hetsy ariary no hivifdiannay ny iray gony any amin’io mpamatsy azy io. Fantatra ihany koa fa mpividy rongony sy mpibata entana ao aminy ireo olona voasambotra tao antrano niaraka tamin’ny rongony ireo. Efa nigadra ny tovolahy iray izay tompon’ny entana tamin’ny taona 2017 noho ny resaka rongony ihany ka izao tra-tehaka izao indray.Natolotra ny fitsarana omaly koa izy ireo.